बीमा समूहको वृद्धिमा 'ब्रेक', नेप्सेलाई बैंकिङको टेवा
ठीक एक वर्षअघि १८८१ अंकमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको नेप्से आज १६४६ अंकमा कायम भएको छ। १. ५ अंकले बढेर नेप्सेले सो अंकमा टेवा पाएको हो।
यस दिन नेप्सेको वृद्धिदरमा बैंकिङ समूह हाबी बन्यो। सो समूह ६ अंकले बढेपछि बिमा, जलविद्युत र फाइनान्स समूहको गिरावटले नेप्सेमा असर परेन।
केही दिनयता लगातार बढेको बिमा समूहको वृद्धिदरमा आज ब्रेक लागेको छ। सो समूह १६० अंकले ओर्लिएको छ। जलविद्युत २१ अंक तथा फाइनान्स ०. ७ अंकले घटेका छन्। बैंकिङका अलवा होटल ६, विकास बैंक २२, उत्पादन ५४ र अन्य समूह ०. ५ अंकले उक्लिए।
यस दिन १५० कम्पनीहरुको १ अर्ब १६ करोडको सेयर किनबेच भएको छ। बजारको पुँजीकरण १९ खर्ब १३ अर्ब कायम भएको छ। प्रभु इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै ५ करोड ८६ लाखको कारोबार भयो।
प्राइम लाइफको ५ करोड १९ लाखको कारोबार हुँदा सगरमाथा इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्स कारोबारका आधारमा उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल भए। वाणिज्य बैंकहरु कारोबारका आधारमा उत्कृष्ट १० भित्र पनि पर्न सकेनन्।
कावेली विकास बैंकको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो भने हिमालय डिस्टिलरी, लुम्बिनी विकास बैंक र कालिका माइक्रोक्रेडिटको मूल्य १० प्रतिशतकै हाराहारीमा बढ्यो। अरुण फाइनान्सकामे मूल्य ६.५ प्रतिशत तथा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको ५.६ प्रतिशतले मूल्य घट्यो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १२, २०७४, ०४:०६:४९